Wayyaaneen Lammata Somalee Weeraruuf Duula Baafte - OPride.com
Maddi qabatamaan akka mirkaneessetti torbaan kana waraanni Wayyaanee Somaalee weeraruuf daangaa Somaaletti timaa jira. Akka jedhamutti loltoonni lakkoofsaan kuma sadi gahan buufata waraanaa Kibba Baha Oromiyaa tti argamutti wal sassaabuun yeroo dheeraaf shaakala adda addaa erga geggeessaniin booda torbaan kana gara daangaa Somaaletti gugataa jiran. Akeekni duula kanaa mormitoota Somalee kan biyyattii ganna harka isaanii keessatti galfatanii jiran irratti duula daguu geggeessuun xiqqaatu funuunsanii duubatti dachaasuuf ykn dadhabsiisuufi akka ta’e maddi oduu kun addeessee jira.
Torbaan dabre Muumichi Ministeera Wayyaanee Mallas Zeenaawii odeeffata gaazexeessitoota biyyattii fi alaatif kennan keessatti humna Tokkummaa Afrikaa kan Hamar keessatti mormitoota Somaaleetiin marfamee lubbuun itti dhuftee jirtu furuuf waraana kan ergu ta’uu ibsuun ni yaadatama. Wayyaaneen bara 2006 humna Maa’ikamaa jedhamu kan biyyattii dhuunfachuun gara mootummaa waaraa gadidhaabutti tarkaanfataa ture haleeluun hawwii isas kichuti kuttee turte. Haa ta’u malee diddaa cimaa isii mudateen loltonni kuma kudha shan caalatti herregaman erga harkaa halaakamanii fi mootummaan maxxantuun Wayyaaneen gorora irraa haqaa baate kola’ee gatantaree erga kufeen booda hoongoftee bara 2008tti dhokaan Somalee gadi lakkiftee baate. Amma ammoo namootuma kaleessa itti duultee arite, Sheek Shariif, irraa miseensota isaanii kan durii ittisuuf arreedaa jirti.
Humni murtii Tokkummaa Afrikaatin Hamaritti riphisee jiraatu hedduminaan Ugaandaa, fi Rwaandaa irraa kan walitti dhufe. Galiin isaas mootummaa Sheek Shariif kan akkuma mootummaa Koloneel Abdullaahii Yuusuf laamsha’ee lafa adda kormaa hin caalle bira dabruu dadhabe tiksuufi. Humni deeggarsaa fi gargaarsa Waldaya Waliigaltee Mootummootaa (UN) irratti irkatee jiraatu kun lakkoofsaan kuma sadeetti akka ga’utti herregama.
Balaa haleellaa magaalaa muummittii Ugaandaatti ji’a Adoolessaatti galeen booda Tokkummaan Afrikaa humna Hamaritti marfamee dhiphina keessa jiraatu kanaaf akka dirmatuuf murteessuun ni yaadatama. Kana wajjiin Prezidaantiin Ugaandaa garee balaa kanaaf gaafatama fudhate, Al-Shabab, dachii irraa dhabamsiisuuf dhaadachuun gabaafamee ture.
Duulli Wayyaaneen haaraatti geggeessuuf muratte kun haalli yeroof too’annaa jalaa akka hin bane kan danda’u ta’us rakkoo biyyattiif gonkuma furmaata ta’uu akka hin dandeenne keessa beektonni ni dubbatu. Falli tokkichi jiru humnoota Somaalee kan waldhaban giddutti marii adeemsisuun araara dhugaa buusuu akka ta’e kanneen eeranis danuudha. Haa ta’u malee teessuma marii marraa 16 boodas, mootummaa ce’umsaa marraa 4 haalli Somalee jeequmsa tokkorraa isa hamatti ce’uun alatti jijjiirama agarsiise hin qabu. Rakkoo kana keessatti harki humnoota ollaa fi fagoo jiraachuun sababoota haalicha daran xaxaa taasisan keessaatti argamu. Duulli kunis rakkoo biyyatti buxa dhamsiisuun alatti furmaata kan hin fidnee fi balaa kana hin jedhamne Itoophiyattis kan harkisu ta’uun sodaa fi yaaddoo ummatoota fihu moormitoota biyyattii ta’uun ni mul’ata.
OPDO fi Gimgamaa Wayyaanee kan bara 2010
Wayyaaneen singiggoo “injifannoo cululuqaa” filannoo dabreen gonfatteen booda faara hin qabdu. Mormitootatti dachii itti dhiphisuu fi ummata sossobaa doorsisuun erga %99.9 “moo’attee” as” mujaa fi qajimaa ofii keessaa aramnee buqqifna” jechuun yeroo ammaa gimgamaa hidda-fageessa geggeessaa jirti. Kanaanis aanga’oonni OPDO hirriba dhaabaniiru. Abbaay Xahaayyee (Tigree), Barakat Simoon (“Amaara”) fi Haylamaariyaam Dassaaleeny (Kibba) sadi ta’uun hooggantoota OPDO siribbii irratti dhiichisaa jiran. Gimgamaan baranaa Presidaantii Oromiyaa, Abbaa Duulaa, irratti kan xiyyeeffatedha.
Presidaantota Oromiyaa dabran sadeen, Hasan Alii, Kumaa Dammaqsaa fi Juneeydii Saaddoo, caalatti Mallasaa fi EPRDFf amanamummaa isaan kan beekkamu Abbaa Duulaa Gammadaa malaanmaltummaan himatamuu qofatti hin dhaabbatne. Ol-deemmaa (promotion) fakkeessuun caffee federaalatti filtamsiifameera. Kunis kan ta’e fedhii isaan maletti. Himata kana ofirraa dachaasuuf hafuura darbaa jira. Himatni irratti dhihaate yakka ol’aanaa kan itti fiduu danda’u waan ta’eef of faccisuuf yaalii guddaa godhaara. Yaalin duraa “akkamitti dhaabni keenya miseensota dhaabbota “biraan” gamaaggamama?” kan jedhu ture. Kanatti hin milkoofne. Deebiin kennameef, “ kuni aadaa dhaaba EPRDF ta’uu daran atuu hooggantoota dhaabbota biro, fakeenyaaf kan Kibbaa, gamaaggamaa turte” kan jedhudha. Marraa lammaffatti yaaliin godhame tarkaanfii kana keessaan mormisiisuu ture. Walgahii koree Gidduu OPDO irratti isa aangorraa kaasuu mormuun miseensonni sadeet teessuma dhiitanii bahanii turan. Haa ta’u malee guyyaa muraasaan booda ejjannoo fudhatan kana irra deebi’uun ceephuu fudhatanii teessumatti akka deebi’an waan ta’eef kanattis hin milkaa’in jira.
Bulchiinsa itti aanu keessatti bakka isaa dhaaluuf kan qopheeffamaa jiru, itti aanaa isaa kan ture, Muktaar Kadiir akka ta’e himama. Umriin Abbaa Duulaaf quxxisuu dha. Muktaar barmoota dabballoota Wayyaaneef Civil Service College tti kennamu irraa hirmaatee erga xumureen booda karaa barmoota dhaamsaa (correspondence) digrii lammaffaa akka argateera. Bakka odaan dhabametti sukaayiin gaaddisa taati akkuma jedhan humna lafaa-dhufaa Mallas OPDO keessatti qopheeffate keessatti akka nama “baratetti” lakkaa’ama. Haa ta’u malee hawaasa keessatti hidda waan hin qabneef Mallasatti mat-dhukubbii itti ta’uu waan hin dandeenyef filamuun isaa akka malu dubbatama.
Malammaltummaan alatti Abbaa Duulaa aangoo irraa kan qaarse fuulli isaa TV Oromiyaa irratti ganama-guyyaa fi galgalas kan dhabamne ta’uudha kan jedhanis jiru.
Akka keessa beektonni himanitti Mallas Zeenaawii namoota sadi, Muktaar Kadiir, Kumaa Dammaqsaa, fi Asteer Maammoo ofitti yaamuun “OPDOn dhukkubsatee du’aaf sakraa irra jira waan ta’eef dhaqaatii fayyisaa koottaa, yoo dadhabame ammoo awwaalaa deebi’aa” jechuun gaafatama akka itti laate. Gareen Kumaa Dammaqsaan durfamu Abbaan Duulaa “maqaa dhaaba keenyaa xureesse” jechuun leelliftoota isaa wajjiin dhaaba keessaa buqqisuu akka barbaadanii fi kanas dhugoomsuuf hojjachaa akka jiran himama.
Maddeen oduu kanaa akka jedhanitti OPDOn maxxantummaa Wayyaanee jalaa haga jirtutti mirga Oromoof dubbachuun hafee kan ofiifuu dubbachuuf tabaroo hin qabdu jedhu. Jaarmayni ofiifuu walabummaa hin qabne Oromiyaa misoomsa jechuun ummatatti qoosuudha. Akkasumas Murteessaan Mallas haga ta’etti Prezidaantiin Oromiyaa Hasan Alii, Kumaa, Juneeydii, Abbaa Duulaa, ykn Muktaar ta’een Oromoof garaagarummaa hin qabu—- hundumtuu raawwachiftota sagantaa saamisa ormaa ti.